Croatia Oo Finalka Koobka Aduunka Iska Xaadiriyay Dhirbaaxo Lama Filaana Ku Dhufatay Xulkii England Kana Reebtay Koobka Aduunka | Berberatoday.com
Croatia Oo Finalka Koobka Aduunka Iska Xaadiriyay Dhirbaaxo Lama Filaana Ku Dhufatay Xulkii England Kana Reebtay Koobka Aduunka
Moscow(Berberatoday.com)-Xulka Croatia ayaa gaadhay finalka koobka adduunka 2018 kadib markii ay 2-1 ay ku garaaceen dhigooda dalka England oo sanadkan kamid ahaa dalalka loo saadlinaayay inay koobka aduunka ku guulaystaan.
Kulanka ayaa ku bilaawday si xiiso badan waxayna labada xul Croatia iyo England ay qeybtii hore ay soo bandhigeen qaab ciyaareed aad u xiiso badan oo farsamadeedu sarayso Waxaana qeybtii hore ee ciyaarta la moodaayay inay kooxda dalka England gacan sarayso.
Cayaarta ayaa lagu kala nastay qeybtii hore 1-0 uu ku hogaaminayay xulka qaranka England, kadib markii uu u dhaliyay daqiiqadii 5-aad ee bilawga qeybtii hore xidiga Kieran Trippier oo dhaliyay laad xor ah ee aad u qurxoon.
Waqtiga loogu tala galay ciyaarta ee 90-ka daqiiqo ayaa wuxuu kusoo idlaaday barbaro 1-1, waxaana lagu daray 30 daqiiqo oo dheeri ah.
Ugu dambeyna kulanka ayaa ku dhamaaday 2-1 oo ay guusha ku raacday xulka qaranka Croatia oo u guday kulanka finalka koobka adduunka ay kula ciyaari doonaan dhigooda dalka France.